Sihlalutya i-Acer Travelmate X5 entsha, iqabane lomsebenzi omkhulu | Iindaba zeGajethi
Sihlalutya i-Acer Travelmate X5 entsha, umntu osebenza naye kakhulu
Acer Iyaqhubeka nokusebenza ukuzibeka njengomnye wabavelisi abanamandla kuzo zombini iilaptops kunye needesika kwintengiso, yiyo loo nto kungxamisekile ukunika ezinye iindlela ezinokuthenjwa phantse kulo naliphi na icandelo, kuba kukho iilaptops zazo zonke iintlobo kunye nazo zonke izinto ozithandayo. ikhathalogu yenkampani.
Ngeli xesha besivavanya i-Acer Travelmate X5 entsha kwaye sifuna ukuba uhlale nathi ukufumana zonke iimpawu zayo. Siza kuhlalutya imeko nganye kwaye yiyo loo nto ungenakuphulukana nomgca omnye wokuphononongwa esikulungiselele wona.
Njengamaxesha onke Siza kulandela ukulandelelana okulula okuvumela ukuba siye ngqo kwiimpawu ezinomdla kakhulu kumzuzu ngamnye, ukusuka kuyilo kunye nezinto zokusebenza kwintsebenzo yemultimedia kwaye kunjalo neempawu zobuchwephesha, ukuze uhlale phantsi kwaye ufunde uhlalutyo lwethu ngokunzulu okanye uye ngqo kwicandelo elenza eyona mibuzo kwaye yeyona inomdla kakhulu, ngaphandle kokuqhubeka ukulibazisa masiye apho, Kodwa ukuba ufuna ukujonga le laptop kwiAmazon kuqala, ungaphoswa leli khonkco.
1 Izinto kunye noyilo: Ukuba iyasebenza, kutheni uyitshintsha?
3 Unxibelelwano kunye nomxholo wemultimedia
4 Ukuzimela kunye namava njengesixhobo somsebenzi
Izinto kunye noyilo: Ukuba iyasebenza, kutheni uyitshintsha?
Kwinqanaba loyilo kufuneka sitsho ukuba i-Acer ayikhethanga ukwenza izinto ezininzi kakhulu, kodwa inyani kukuba akukho mntu uyifunayo kwimveliso enje. Ngokwam, bendihlala ndicinga ukuba xa ilaptop iyeka ukubhitya, ukukhanya, ukudibanisa kunye namandla inamandla okuphulukana nobuntu bayo. Uphawu luthathele ingqalelo oku kunye nale Travelmate X5 yenzelwe ukuba ungaya naphi na apho ufuna khona ngaphandle kokuba ibe ngumthwalo. Yenzelwe yona Sine-14 ″ isikrini, sikhatshwa bubude beemilimitha eziyi-14,9, ububanzi beesentimitha ezingama-32,9 kunye nobunzulu beemilimitha ezingama-229 kubunzima obungafikeleli ikhilogram, ngakumbi ngakumbi i-980 gram.
Ubungakanani: 14,9 x 329 x 229
Ubunzima: I-980 gram
Ngaphandle kwamathandabuzo kwinqanaba lobunzima-lobunzima benze umsebenzi omhle, Njengoko ubona kwiifoto esinokuyibamba ngaphandle kwengxaki ngentende yesandla sethu, kwaye oku kubaluleke kakhulu kubunjineli. Yenziwe phantse iplastikhi, inebhodibhodi ebuyisiweyo kunye nenkqubo yesitshixo efanelekileyo. I-trackpad ayinkulu ngendlela ebendinokuyithanda ngayo, kodwa akukho nzima kangako ukuyisebenzisa nokuba, kwinqanaba loyilo nakwizinto esinazo ezimbalwa, Ndifumanise ukuba ukuba bebengazisebenzisanga iplastiki ngesingazange sifike kwezo ndawo ziphakamileyo zobunzima.
Ukucaciswa kweTekhnoloji yeAcer Travelmate X5
Umzekelo Umntu ohamba naye X5
Inkqubo yokusebenza Windows 10 Pro
Isikrini I-14 intshi (35.6 cm) IPS Pro FullHD LCD
Inkqubo Intel i5-8265U
GPU Imizobo ye-UHD 620
i-ram 8 / 16GB DDR4 SDRAM
Ukugcinwa kwangaphakathi I-128/256/512 GB
Izithethi Isitiriyo 2.0
Unxibelelwano 2x i-USB 3.0 - 1 i-USB 3.1 - 1x i-HDMI
Ezinye izinto Isivamisi somnwe
Ibhetri I-4.670 mAh yeeseli ezimbini (8h yokuzimela)
Ubukhulu 114.9 x 329 x 229
U bunzima I-980 gram
Ixabiso ukusuka kwi-999 euros
Njengoko sinokucinga, le Travelmate X5 Pro ayinanto kwaphela, kodwa eyona nto isisiseko kukuba sine-8 okanye i-16 GB ye-RAM ngokuxhomekeke kukhetho lwethu, sikhatshwa luhlu lweeprosesa ze-Intel i5 zesizukulwane se-XNUMX ezinegama elikhulu.
Iimpawu zaziwa ngaphezu kwenu nonke, asizukufumana nakuphi na ukuqhayisa kwinqanaba lekhadi lemizobo, kodwa endaweni yoko kuthotho lwezinto ezihamba kunye ngenjongo yokubonelela ngamava azinzileyo, Kwimeko yethu sineyunithi ene-8GB ye-RAM, isizukulwane sesibhozo i-Intel i5 kunye neyunithi yokugcina ye-256GB ye-SSD, ibhalansi elungileyo ebonakalise ukuba iyasebenza kwiimvavanyo zethu zemihla ngemihla.
Unxibelelwano kunye nomxholo wemultimedia
Kwinqanaba loqhagamshelo lweBluetooth sinenguqulelo yamva nje eya kusivumela ukuba sikhawulezise ukuhambisa iifayile kodwa ngaphezulu kwako konke ukuhanjiswa kwesandi ngaphandle kwelahleko ebonakalayo okanye uqhawuko. Kwinqanaba le-WiFi ngokufanayo, ngokupheleleyo iyahambelana ne-2,4 GHz kunye neenethiwekhi ze-5 GHz ezizezona zixhaphakileyo kwilizwe lethu, asinakho ukubeka ezinye kodwa kweli candelo, inyani. Sibala ngokulandelelana ngezithethi ezibini zestiriyo ezibekwe emazantsi encwadi yokubhalela kwaye banele kodwa abasishiyi naluphi na uhlobo lokuqhayisa, abanazo iziseko kodwa umxholo uvakala ngokucacileyo, basinceda ukuba silumke silumke Isikrini esigcweleyo Ayikhathazi kukubonakaliswa kwaye iboniswa ngokukhanya okwaneleyo. Sinekhamera yewebhu ngaphezu kokwaneleyo kwiinkomfa eziqhelekileyo.
Kwinqanaba lonxibelelwano sine-USB-C enye kunye ne-USB-A ezimbini, hayi kodwa kweli candelo. Izibuko le-HDMI alinakuphulukana nayo ukuba iimveliso ezininzi zikhetha ukuyiphelisa, le kwimbono yam iyithanda kakhulu iTravelmate X5, kuba uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi kum isesemgangathweni ngokusetyenziswa ngokufanayo kwaye ikude ekubeni inganakwa ziimpawu, zimbalwa izinto zikukhuphela ngaphandle kwengxaki kune-HDMI egudileyo, ukudibanisa.
Ukuzimela kunye namava njengesixhobo somsebenzi
Le Travelmate X5 isishiye malunga neeyure ezisixhenxe zokusebenzisa ngokuqhubekayo kunye nokuqaqamba kwezitshixo kumandla aphakathi ngelixa sihlela isicatshulwa kwiiprosesa ezahlukeneyo esinazo, zombini ngeWordPress eneLizwi elifanayo leOfisi. Izinto ziyatshintsha xa sisiya kwizixhobo zokuhlela imifanekiso ezinje ngeAdobe Photoshop xa abalandeli beqala ukukhanyisa kwaye ukuzimela kwehla kuye kwiiyure ezintlanu ezinesiqingatha ngokudibeneyo nokuhlelwa kwevidiyo, kunye neeyure ezintathu kuphela ukuba sizinikele ekudlaleni njengeeCities Skylines.
Kwinqanaba lokusebenza, ngaphezulu okufanayo, liyazikhusela elubala ngokuchasene nezixhobo zokuhlela imifanekiso ezinjengezo zikhankanywe apha ngasentla kwaye iyakwazi ukuhambisa iiCities Skylines ngemizobo edibeneyo kumanqanaba aphakathi ngaphandle kokunyuka kwamandla. Izinto ziyatshintsha ngokuhlelwa kwevidiyo okanye ukuba sifuna imidlalo enzima ngakumbi. Le Travelmate X5 ngokuqinisekileyo ayiyiyo ilaptop yokudlala, kwaye ayisosixhobo esibonakalayo, Endaweni yokuba sijamelane nesixhobo esinokubhetyebhetye kakhulu esinokuba liqabane elihle lemihla ngemihla eyabafundi kunye neyabantu abasekela ubomi babo bemihla ngemihla ekubhaleni nasekuhleleni amaxwebhu, i-Excel kunye namanyathelo okuqala ngeAdobe Photoshop.
Siphinde sajongana nemveliso elungeleleneyo eboniswa uyilo olumnandi njengokhetho olufanelekileyo kubasebenzi nakubantu abafuna ukuya naphi na kunye nelaptop. Ingxaki iza xa sikwiimarike apho uninzi lweefemu ezinjenge-LG, iHuawei, iXiaomi kunye neApple zilwela isihloko selaptop enokunyamezeleka, kwaye i-Acer ibeke amakhadi ayo etafileni ukusuka kwi-900 euro (unxibelelwano), ndiphoswe lithuba elicace gca lokuhlengahlengisa ixabiso kunye nokwaphula intengiso. Yimveliso elungileyo kwaye iyacetyiswa, kodwa ayinako ukwahlulahlula kukhuphiswano.
Sihlalutya iAcer Travelmate X5 entsha
Izinto kunye noyilo zibonakala
Ubunzima obungaphantsi kwe-1Kg obumnandi ngokwenene
Ukurhweba kakuhle kwi-hardware
I-Trackpad inokuphucula kakhulu
Banokukhetha ukubiza nge-USB-C
Ayenzi izinto ezintsha kwintengiso egcweleyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Sihlalutya i-Acer Travelmate X5 entsha, umntu osebenza naye kakhulu
Indlela yokususa abalandeli kwi-Instagram
Ukufumana simahla: Eyona software ifanelekileyo yokufumana kwakhona idatha esusiweyo